I-Semalt inikeza izizathu ezizwakalayo zokusebenzisa i-Twitter eklasini
Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi i-Twitter ingenye yewebhusayithi eyaziwa kakhulu futhi emangalisayo yezokuxhumana. Kuyinto inethiwekhi engavamile enamathuluzi amaningi okusiza kokubili abafundisi nabafundi ukuthi baxhumeke.
Kuze kube manje, i-Twitter isibe yindawo enhle kunazo zonke ezokuxhumana nabantu uma kuziwa ebhizinisini, ukukhuthazwa kwesayithi, izimbangela ezingezona inzuzo, imicimbi, kanye nemfundo. Lapha, u-Andrew Dyhan, Semalt uMenenja Wokuphumelela Komthengi we-Semalt, ukhulume ngezindlela eziphawulekayo zokusebenzisa i-Twitter eklasini ngendlela engcono - mejores fotografos latinoamericanos definicion.
Izenzakalo zamakilasi nezamemezelo
Enye yezinzuzo ezinhle kunazo zonke zokusebenzisa i-Twitter eklasini ukuthi yenza izenzakalo zeklasi nezimemezelo zilula futhi zishesha. Ungabelana ngolwazi mayelana nemicimbi ezayo, izivivinyo, imibuzo, nakho konke ozizwayo kubalulekile kubafundi. Ungasebenzisa futhi i-Twitter ukuthumela amaphrojekthi, izabelo, nezenzakalo ezikhethekile ku-intanethi. Izinsuku zokuhlolwa zingashunyayelwa ngale ndawo yezokuxhumana. Abafundi abadala bangakwazi ukuxhumana nabafundi abasha, futhi bonke bangakwazi ukuxhumana nabanye ngamakhasi kanye nemiphakathi ye-Twitter.
Ukukhuthaza izingxoxo eziqhubekayo
Othisha bethu nabafundi bethu bangakhuthaza izingxoxo eziqhubekayo ku-Twitter uma iseshini iphelile. Lokhu kuzosiza abasha ukuthi bafunde izinto eziningi ezintsha. Ngenkathi elasini lakho, ungakwazi ukurekhoda izinkulumo nazo zonke ezincane imininingwane futhi uyenze ilayishwe ku-Twitter. Abafundi abaningi abazimisele ukuvuma ekolishi lakho bangazuza kulezi zingoma kanye nama-audios.Kwenza futhi othisha bazi konke mayelana neziphambeko zabo kanye nezinkinga zabafundi.
Ukulandelela Kwendawo Yomsebenzi
Abafundi abasebasha abahlola imisebenzi ehlukene kanye nezinsimu bangathola ulwazi kanye nokuqukethwe okufanele ku-Twitter. Othisha, kulula kakhulu ukwabelana ngezinto ezisebenzayo ku-intanethi ukuze abafundi abaningi futhi bazuze. Ngamanye amazwi, singasho ukuthi i-Twitter iyindlela enhle kakhulu yokuxhumana nabothisha bakho noma abafundi ukuze ukwazi ukusiza omunye nomunye ukhethe umsebenzi ofanele. Nge-Twitter, othisha bethu bangafundisa abafundi babo futhi babelane ngokuthumela umsebenzi ngaphakathi nangaphandle kwekampus ukuze bakwazi ukuhambisa izicelo zabo ngokufanele.
Othisha, kulula kakhulu ukudala nokwabelana ngezivivinyo zokubhala online. Esikhundleni sokuthumela imiklamo kubo bonke abafundi, othisha bethu bangawalayisha ku-Twitter ukuze abafundi abangaphandle kwe-campus bafunde okuthile okusha kulezi zivivinyo. Mema abafundi ukuba babambe iqhaza kulezi zivivinyo ngaphakathi nangaphandle kweklasi, futhi zenze zibe khona kokubili ku-Facebook naku-Twitter. Qinisekisa ukuthi ufake ama-hashtag afanele kuma-tweets ukuze okuqukethwe kwakho kuhlale kutholakala kunani elikhulu labantu.
Ukubhuloga kanye Nemithombo Yomphakathi
Othisha bethu bangafundisa abafundi babo ukuthi bangayithola kanjani inthanethi ngokusebenzisa i-Twitter. Kuyinto yesikhulumi esikhulu sokuhlanganyela okuthunyelwe kwebhulogi yakho futhi uhlanganyele abantu abaningi nokuningi. Ku-Twitter, kubalulekile ukubhala izindaba eziphumelelayo ezikhuthaza abantu abaningi ukuba bahlanganyele emakilasini akho okungaxhunyiwe ku-intanethi naku-intanethi.